Articles – Page 113 – CELE WINGAGAR
ပရဟိတအလုပျတှေ ပွနျ လုပျပွရငျး ပွညျသူ တှကေို မကျြရညျခြူဖို့ ကွံစညျ နတေဲ့ သကျသကျခိုငျရဲ့သမီးလေး
August 7, 2021 100million 0
ပရဟိတအလုပျတှေ ပွနျလုပျပွရငျး ပွညျသူတှကေို မကျြရညျခြူဖို့ ကွံစညျနတေဲ့ သကျသကျခိုငျရဲ့သမီးလေး ပရိသတျကွီးရေ လူကယျပွနျ ဝနျကွီး သကျသကျခိုငျရဲ့ တဈဦးတညျးသော သမီး အဆိုတျော G ကတော့ အာဏာမသိမျးခငျ ကာလတုနျးက ပွညျသူတှအေတှကျ လိုအပျတာတှေ ကူညီပေးဖို့ လူမှုကူညီရေးအဖှဲ့ တညျထောငျထားခဲ့ပါတယျနျော။ အာဏာသိမျးမှုဖွဈစဉျဖွဈသှားပွီးနောကျပိုငျး ပွညျသူမြားမှ ဝဖေနျရှုံ့ခတြဲ့ […]
အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ PDF စခန်းအသီးသီးသို့ စားနပ်ရိက္ခာများပေးပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ မေဦးနဲ့ ထားထက်ထက်ကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ PDF လူငယ်လေးများ
အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ PDF စခန်းအသီးသီးသို့ စားနပ်ရိက္ခာများပေးပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ မေဦးနဲ့ ထားထက်ထက်ကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ PDF လူငယ်လေးများ အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ရေးမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် မေဦးနဲ့ ထားထက်ထက်တို့ကလည်းချန်ထားလို့မရတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတည်းကတိုင် လမ်းထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့သလို အခုဆိုရင်လည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုသွားရောက်ကာ အာဏာရှင်တော်လှန်ဖို့အတွက် စစ်ပညာသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထားထက်ထက်ဟာဆိုရင်လည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ Gen […]
ဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်း ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေမှာပျောက်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့ မီးနို
အဆိုတော်မီးနိုကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ ရရာနေရာကနေတတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်အားဖြည့်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူ မီးနိုကလည်း အလှူလေးတွေနဲ့ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်နေတာပါ။ မကြာခင်က သူမဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ ပြီး အားလုံးက စိတ်ပူပန် ခဲ့ကြရပါတယ် ။ အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေ ထက်မှာ အချိန်တော်ကြာ ပျောက်ကွယ်နေတာကို […]
မိခငျကွီးရှိစဉျက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ အောကျစီ ဂငျြနဲ့ ဆကျ စပျ ပစ်စညျး တှကေို လိုအပျနေ သူတှအေတှကျလှူဒါနျးပေးလိုကျတဲ့ မပေနျးခြီ….
ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး မပေနျးခြီ ကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့မှာရှိနတေဲ့ အောကျစီဂငျြနဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို လှူဒါနျးပေးသှားဖို့စီစဉျနခေဲ့ပါတယျ။ လှူဒါနျးပေးမယျ့ ပစ်စညျးတှကေတော့ အောကျစီဂငျြအိုးတှမှော တပျဆငျအသုံးပွုတဲ့ Flow meter နဲ့ Oximeter (၃)လုံးဖွဈပွီး တကယျလို အပျနတေဲ့သူတှကေို လှူဒါနျးပေးမှာပါတဲ့ ။ […]
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို ပရိတ်သတ်တွေအားအသိပေးလာခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း….
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဝိုင်းစုကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း မျှဝေဖော်ပြလာ ခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းစုကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ကိုဗစ် စစ်ဆေးမှုရလဒ်နဲ့အတူ “ခေတ်မှီသွားပြီ” ဆိုပြီး ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းမျှဝေလာခဲ့တာပါ။ လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် ကူးစက်မှုနှုန်းက မြင့်တက်နေခဲ့ပြီး လူတိုင်းလိုလို ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။ […]
ကိုဗစ်ရောဂါကို အနိုင်တိုက်ထုတ်နို င်တော့မယ့် ၀ါရင့် သရုပ်ဆောင် အန်တီနွဲ့နွဲ့စန်း ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ….
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီးဖြစ်တဲ့အန်တီနွဲ့နွဲ့စန်းကတော့ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်မှုေ တွေ ကြာင့်ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုယနေ့ထိတိုင်ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအန်တီဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီးဆေးရုံတတ် ပြီးကုသမှုခံယူနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကူးစက်မြန် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လူအများအပြားအောက်စီဂျင်ကျပြီးသေ ဆုံးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အန်တီဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းကတော့လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ခုချိန်မှာတော့ ရောဂါသက်သာလာပြီး မကြာခင်လုံးဝပျောက်ကင်းပြီးအိမ်ပြန်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေ ပို့သပေးတဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ခုလို အန်တီနွဲ့နွဲ့စန်းကိုဗစ်ရောဂါကိုအနိုင်တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီး သက်သာလာတဲ့အတွက် […]
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုထိစေမယ့် စကားလုံးတွေနဲ့မကောင်းမှုတွေလုပ်ေ နတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိပြောလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်….
သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်တဲ့အတူအပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလဲအနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးတတ်ပါသေးတယ်၊စိတ်ထားကောင်းတဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော်ကအလှူအတန်းတွေမှာလဲရက်ရက်ရောရောရှိသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်၊အာ့ဒီအချိန်မှာသင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောကြားထားတဲ့စကားလုံးများကပရိတ်သတ်များရဲ့ရင်ထဲကိုထိစေခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲနော်၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသင်ဇာဝင့်ကျော်ကမကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအပြတ်ပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သင်ဇာဝင့်ကျော်ကအလိမ်ခံရလည်းပြုံးနေတယ်၊အစော်ကားခံရလည်းပြုံးနေတယ်၊ယုတ်မာတာခံရလည်းပြုံးနေတယ်၊အရမ်းကြီးသဘောထားကြီးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဝဋ်ဆိုတာကတုန့်ပြန်တဲ့အခါပိုပြီးတိကျတယ်၊ပြတ်သားတယ်၊မျက်နှာမလိုက်ဘူး ၊တောင်းပန်လို့မရဘူး၊ငွေပေးလို့လည်းမရဘူး။ကိုယ်လုပ်သမျှမကောင်းမှုတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာထပ်တူပြန်ရတာကိုဝဋ်လည်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ငါတော့မကောင်းတာအကုန်လုပ်တယ်၊ငါအမြဲနိုင်နေတယ်ဆိုပြီးမာန်တက်မနေပါနဲ့၊သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာရှိပါတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဆိုသလိုသူကြိုက်တာသူလုပ်သူဖြစ်သူခံပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ကိုပြန်လည်ကူးယူမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ Credit သရုပျဆောငျသငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျတဲ့အတူအပီပွငျဆုံးသရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ကရြာဇာတျကောငျတှမှောအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့မငျးသမီးခြောပဲဖွဈပါတယျ။သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ပရဟိတလုပျငနျးတှမှောလဲအနုပညာရှငျညီအဈကိုမောငျနှမမြားနဲ့ပူးပေါငျးပွီးတကျတကျကွှကွှပါဝငျကူညီလှူဒါနျးပေးတတျပါသေးတယျ၊စိတျထားကောငျးတဲ့သငျဇာဝငျ့ကြျောကအလှူအတနျးတှမှောလဲရကျရကျရောရောရှိသူတဈယောကျလဲဖွဈပါတယျနျော။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတျောလှနျရေးကွီးမှာလဲပွညျသူတှနေဲ့အတူအမှနျတရားဘကျကပါဝငျခဲ့ပွီးလမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျလှုပျရှားခဲ့ပါတယျ၊အာ့ဒီအခြိနျမှာသငျဇာဝငျ့ကြျောပွောကွားထားတဲ့စကားလုံးမြားကပရိတျသတျမြားရဲ့ရငျထဲကိုထိစခေဲ့တာတော့အမှနျပါပဲနျော၊အခုတဈခါမှာဆိုရငျလဲသငျဇာဝငျ့ကြျောကမကောငျးမှုလုပျနတေဲ့သူတှကေိုအပွတျပွောပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျနျော။သငျဇာဝငျ့ကြျောကအလိမျခံရလညျးပွုံးနတေယျ၊အစျောကားခံရလညျးပွုံးနတေယျ၊ယုတျမာတာခံရလညျးပွုံးနတေယျ၊အရမျးကွီးသဘောထားကွီးလို့တော့မဟုတျပါဘူး၊ ဝဋျဆိုတာကတုနျ့ပွနျတဲ့အခါပိုပွီးတိကတြယျ၊ပွတျသားတယျ၊မကျြနှာမလိုကျဘူး ၊တောငျးပနျလို့မရဘူး၊ငှပေေးလို့လညျးမရဘူး။ကိုယျလုပျသမြှမကောငျးမှုတှကေိုတဈခြိနျခြိနျမှာထပျတူပွနျရတာကိုဝဋျလညျတယျလို့ချေါပါတယျ၊ငါတော့မကောငျးတာအကုနျလုပျတယျ၊ငါအမွဲနိုငျနတေယျဆိုပွီးမာနျတကျမနပေါနဲ့၊သကျရောကျမှုတိုငျးမှာတနျပွနျသကျရောကျမှုဆိုတာရှိပါတယျ။ကိုယျကွိုကျတာကိုယျလုပျကိုယျဖွဈကိုယျခံဆိုသလိုသူကွိုကျတာသူလုပျသူဖွဈသူခံပါလိမျ့မယျဆိုပွီးတော့သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာရေးသားဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျနျော၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျကိုပွနျလညျကူးယူမြှဝတေငျဆကျပေးလိုကျရခွငျးပဲဖွဈပါတယျနျော။ Credit celeupdatenews celeupdatenews
စားဝတျနရေေးခကျခဲနေ တဲ့ပွညျသူ တှအေတှကျ အခွေ ခံစား သောကျကုနျတှေ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဒိနျဒေါငျ…
ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ ဟာသလူရှငျတျော ဒိနျးဒေါငျကတော့ ဒီနမှေ့ာ စားဝတျနေ ရေးခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျလှူဒါနျးတဲ့ အလှူလေးကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒိနျးဒေါငျကတော့ သူကို ယျတိုငျ ဦးစီးပွီး “ခြှနျတှနျး” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသငျးလေးတဈခုကို တညျထောငျထားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါစတငျဝငျရောကျလာခြိနျကတညျးက စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ […]
သူမ နာမညျကို အသုံးခကြာ လိမျလညျနကွေသူ တှေ ရှိကွောငျး ပွတျသား စှာ သတိပေး ပွောကွားလာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ….
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေို အငျတိုကျအားတိုကျ ပွုလုပျနတောကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ခဈြခငျလေးစားမှုမြားကို ရရှိထားသူ ပဲဖွဈပါတယျ။ အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှဆေီလညျးဘယျ လောကျဝေးဝေး နီးနီး ကိုယျတိုငျ သှားရောကျကာ အစားအသောကျနဲ့ အလှူငှတှေကေို တတျအားသရှေ့ ကူညီလှူဒါနျးပေးနတော ဖွဈပါတယျ ။ ခုလို ကိုဗဈကာလတှမှောလညျး အောကျဆီဂငျြမလုံလောကျတဲ့ ပွဿနာတှကေို […]
ရင်နဲ့မဆံ့အောင် ခံစားလွမ်းဆွ တ်နေရပေမယ့် လိုင်းပေါ်တက်ရေးရင် ပြိုလဲနေပြီအထင်နဲ့ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်..
ရင်နဲ့မဆံ့အောင် ခံစားလွမ်းဆွတ်နေရပေမယ့် လိုင်းပေါ်တက်ရေးရင် ပြိုလဲနေပြီအထင်နဲ့ ထိုးနှက်တိုက် ခိုက်ကြတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်.. အဆိုတော်ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးထားရတာကြောင့် ပူဆွေးသောကရောက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးက စိတ်ထားပြည့်ဝပြီး အမြဲတူယဉ်တွဲကာအလှူဒါနတွေနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှူတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရည်သိန်းတန်က အခုဆိုရင် ခင်ပွန်းမရှိတော့တာကြောင့် ဝမ်းနည်းခံစားရပေမယ့်လည်း သွားလေသူအတွက်ရည်စူးပြီး အလှူအတန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရည်သိန်းတန်က အခုချိန်မှာ […]
« 1 … 112 113 114 … 146 »
အရမ်းချစ်ရတဲ့ တစ်ယောက်သောသူအတွက် နှလုံး သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကိုပြသလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ
ပြည်ပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးနေချင်စရာကောင်းလှတဲ့ သူမတို့ရဲ အိမ်သစ်ကြီးကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ပြသလာခဲ့တဲ့ အောန်ဆိုင်း
ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကို မိန်းကလေး ဆန်ဆန်ထိုင်ပြီး စိတ်တိုင်းကျပြန်စစ်နေတဲ့ Ivy လေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးကို ပြသလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
နံပြားတွေကိုအား ရပါးရစားနေတဲ့ဆောင်းယွန်းစံရဲ့သနားစရာအဖြစ်ကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ဆေးထိုးစနောက်လိုက်တဲ့ နေဒွေး